Ukwakhiwa Crane, Crane Machine, Crane Service, Engine Crane - XJCM
I-Rrain Terrain Crane
I-Self Erectioning Tower Crane
Izingxenye Ezinkulu Zokwakhiwa
Izingxenye zesakhiwo se-Excavator
Izingxenye zesakhiwo seLoader
Ukuphakamisa ikhebula crane
I-XJCM ibhizinisi lebhizinisi likazwelonke eliphakeme elakhiwe ngobungcweti, elikhiqiza futhi libhekane ne-crane yasemgwaqeni, iloli crane, i-tower crane neminye imishini yokwakha.
Ukuzakhela u-crane wombhoshongo
I-crane yezwe elibi
Ngaphezu kwemikhiqizo yokusebenza ephezulu, i-XJCM inikeza insizakalo ethembekile yomhlaba. Lokho kusho ukuthi sikuvumela ukuthi usebenze ngokuphepha nangendlela efanelekile - noma ezimeni ezimbi kakhulu.
i-mobile tower crane
XJCM brand 12 ton knuckle boom iloli crane encane
I-XJCM 80 ton crane yeselula iyathengiswa
Ungqimba lwamapayipi angama-24
XJCM brand Ukuphakamisa ikhebula crane
Iloli le-XJCM brand 25 ton nge-crane iyathengiswa
30 Ton Ukuphakamisa umshini ezimangelengele sezwe crane
I-XJCM brand Self Iyalayisha futhi ithula iSanitatio ...
Isungulwe ngo-2002, i-Xuzhou Jiufa Construction Machinery Co., Ltd (XJCM). ibhizinisi elinamasheya enhlokodolobha yokutshala imali engu-RMB16 million. Inkampani yethu ihlanganisa indawo engama-square metres ayizinkulungwane ezingama-53, izinkulungwane ezingama-38 zazo ezenzelwe imihlangano yokufundisana. Sinezikhungo ezingaphezu kwezingama-260 ezintsha sha nezithuthukile. Sisebenza ngokukhethekile ekukhiqizeni izakhiwo ezinkulu zemishini yokwakha futhi amandla ethu okukhiqiza wonyaka ngamathani ayizinkulungwane ezingama-20. Imishini yobuchwepheshe obuphezulu yokulawulwa kwamanani, i-welding, i-forging kanye nokwelashwa kokushisa iyasetshenziswa enqubweni yokukhiqiza kwethu. Imikhiqizo eyinhloko ye-XJCM i-crane yasemgwaqeni onolaka, i-truck crane, i-self -erecting tower crane, i-pipelayer esebenza ngemisebenzi eminingi kanye nezingxenye eziningi zemishini yokwakha. Ngokuqinisekile zisezingeni elijwayelekile. Ama-crane ethu ochungechunge we-RT, ama-crane e-QY eloli yochungechunge kanye nama-cranes e-JFYT ochungechunge athunyelwa eNyakatho Melika. INingizimu Melika, i-Afrika, iMpumalanga Ephakathi, iNtshonalanga ye-Asia, i-Southeast Asia namanye amazwe angaphezu kwezi-30 nezifunda.
I- "RT series off-road crane" icwaningwe ngokuzimela futhi yathuthukiswa yile nkampani yamukelwa "njengomkhiqizo osezingeni eliphakeme" nguMnyango Wezesayensi Nobuchwepheshe esifundazweni saseJiangsu futhi yafakwa ohlwini ku "National Torch Plan Industrialization Demonstration Project" nguMnyango weSayensi Nobuchwepheshe.
I-XJCM igxile ekukhiqizeni izakhiwo ezinkulu zemishini yokwakha.Sinikezela ngamabhakede we-excavator, amabhakede we-loader, izingalo ze-rocker, ama-booms, amafreyimu angaphambili, amafreyimu angemuva, ama-pin roll neminye imikhiqizo ehlobene ne-XCMG, CAT, FOTON, LIUGONG, HELI forklift, YUTONG neziningi ezinye izinkampani zemishini ezidumile eChina.
Loader Uhlaka ezingemuva
Ukunikezwa kwe-XJCM Crane boom
XJCM ngezifiso Zonke Model Wheel Loader Ibhakede
Chinese Umkhiqizi Yamadivayisi 2ton Ukuze 100ton Excava ...
Sizokwandisa futhi siqinise ukubambisana esinakho.
Ikheli:NO.1 Dapeng Industrial Park, Tongshan District, Xuzhou, Jiangsu, China